Health Archives - Triveni Online
स्वास्थ्यका लागि अमृत हो पुदिना, जान्नुहोस यसका फाइदा | सक्दो सेयर गराैं !!! नमस्कार साथीहरु, म तपाईको चिरपरिचित मित्र, तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी दिन सदाको जस्तै आज पनि तपाईको सेवामा स्वास्थ सम्बन्धि महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी लिएर उपस्थित भैसकेको छु । पुदिना अचारको रूपमा उपभोग गरिने वस्तु, औषधीय गुणले समेत उत्तिकै …
काठमाडौ । मानव शरिरमा फलफूलले हामीलाई चाहिने पोषक तत्व र भिटामिन दिन्छ । त्यस्तै फलफूलले मात्रै होइन् ,फलफूलको बोक्राले पनि हाम्रो अनुहारमा सुन्दरता ल्याउन मदत गर्छ । तर हामी बोक्रालाई काम नलाग्ने चिज भन्दै फोहोरमा फ्याक्छौ । त्यसैले आज हामी तपाईहरुलाई फलफूलको बोक्राको फाइदाबारे बताउदै छौ । हेरौ मेवाको बोक्रा …
आयुर्वेदमा मनतातो पानीका विभिन्न फाइदा बताइएको छ । यदि हामी दैनिक एक गिलास मनतातो पानी पिउनुहुन्छ भने त्यसले तपाईंको पेट त घटाउँछ नै, यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई पनि टाढा राख्छ । जयपुरको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेदका विज्ञ डा. गोबिन्द पारिकका अनुसार दैनिक खाली पेटमा एक गिलास मनतातो पानी पिउँदा शरिरको …
आँखा कमजोर भयो ? आईलेन्स लगाउनुहोस्, फाइदा बेफाइदा यस्ता छन्
चश्मा लगाउँदा साथीहरुले चश्मा लगाउनेको नाम नै चश्मिस राखेको कुरा याद छ ? हो आँखा कमजोर भएर चश्मा लगाउनुको पीडा बेग्लै छ । त्यस माथि चश्मा भनेको रंग र आकारमा नपाउदाँ झनै सकस हुन्छ । अझ भनौँ पावरवाला चश्मा लगाएर बाइक र स्कुटर चढ्नेको पीडा अर्कै छ । चश्मा लगाउनु …
सुगर भनेको के हो ? सुगर भएको मान्छेलाई छुट्टै खाना जरूरी पर्दैन : विशेषज्ञ डा. रूपक
काठमाडौँ । पछिल्लो सयम बद्लिदो दैनिकी र खानपानको कारण मानिसहरुमा विभिन्न किसिमका रोगहर देखिन थालेका छन् । त्यसै मध्येको एक रोग हो सुगर । यसलाई सुगर, डाइभिटिज, मधुमेह र चिनीरोगले चिनिन थालेको छ । शरिरमा चिनीको मात्रा बढी हुनु भनेको शरिरमा इन्सुलिनको कमी हुनु हो । हामीले खाने हरेक चिज …
१ पातले तपाईलाई ७० बर्ष सम्म बिरामी हुन दिने छैन
१ पातले तपाईलाई ७० बर्ष सम्म बिरामी हुन दिने छैन नमस्कार साथीहरु, म तपाईको चिरपरिचित मित्र, तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी दिन सदाको जस्तै आज पनि तपाईको सेवामा स्वास्थ सम्बन्धि महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी लिएर उपस्थित भैसकेको छु । गुणको खानी मेवा त्यसमा पनि यसको पात साह्रै गुणकारी चिज हो । मेवा …
काखी गन्हाउने समस्या छ? यस्ता छन् बच्ने ९ घरेलु उपाय | सक्दो सेयर गराैं !
म तपाईको चिरपरिचित मित्र, तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी दिन सदाको जस्तै आज पनि तपाईको सेवामा स्वास्थ सम्बन्धि महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी लिएर उपस्थित भैसकेको छु । पसिनाको गन्धले कहिले काही तपाईलाई लाजमर्दो बनाई दिन्छ । केही समय यता नेपालको सबै जसो भूभागमा गर्मी मौसम पनि सुरु भइसकेको छ । जाडो मौसमको …
सावधान ! नङ पालिस लगाउने गर्नुहुन्छ ? यस्ता गम्भिर समस्या आई पर्ला हैं
नमस्कार साथीहरु, म तपाईको चिरपरिचित मित्र, तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी दिन सदाको जस्तै आज पनि तपाईको सेवामा स्वास्थ सम्बन्धि महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी लिएर उपस्थित भैसकेको छु । के तपाई नङ पालिसको शौखिन हुनु हुन्छ ? तर यही नङ पालिस तपाईंका लागि खतरा बन्न सक्छ, बेलैमा सचेत हुनुहोस् । यो कुरा …
सावधान ! चटपट र पानीपुरी खानाले हुन सक्छ क्यान्सर लगायत अन्य भयंकर रोग
सावधान ! चटपट र पानीपुरी खानाले हुन सक्छ क्यान्सर लगायत अन्य भयंकर रोग सडकपेटी या पसलमा गएर तपाईं चटपट र पानीपुरी खाने इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ भने एकपटक सोच्नुस् । यो तपाईंलाई खतराजनक पनि हुन सक्छ । हालै प्रकासित एक खबरका अनुसार चटपट र पानीपुरीको सेवनले क्यान्सर जस्तो घातक रोग लाग्नसक्ने …
सावधान ! कपाल नुहाउने बित्तिकै भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती !
काठमाडौँ । दिनभर आफुले गर्ने कामहरुको बारेमा ध्यान नदिँदा नै कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या हुने गर्छ । त्यति मात्र हैन् कपालको स्यहार गर्ने क्रममा थोरै गल्ती गर्दा पनि कतिपय केटा मानिसहरुको त तालो नै खुइलिन्छ । हेयर एन्ड ब्यूटि एक्सपर्टका अनुसार नुहायो भने कपालको जरा कमजोर भएर झर्ने गर्छ …